6 Dec 6, 2012 - 6:15:43 AM
Inta la ogyahay 13 qof ayaa ku dhaawacmay Qarax bam oo maanta 0
6 December,2012 ka dhacay gudaha Suuqa weyn ee Bakaaraha, iyadoo kooxihii weerarka geystay ay goobta ka baxsadeen, in saraakiisha DF ay sheegeen in qaybteen dad ay weerarka uga shakisan yihiin.
Dadka dhaawacmay ayaa waxay u badan yihiin haweenka dahabka ka ganacsada iyadoo aanay jirin cid sheegatay inay Ma'suul ka tahay weerarka oo noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahan ka dhaca suuqa.
Suuqa Bakaaraha ayaa ah midka ugu mashquulka badan Koonfurta Somalia iyadoo markii uu Qaraxu dhacay ay xaalada suuqa Isbedeshay, waxaana suuqa buuxiyay ciidamada DF oo baaritaano sameeyay.
"Dhowr gabdhood oo dhaawacyo kala duwan qaba ayaan arkay, waayo waxa ma ahayn wax aan filaynay, waxaan ka warhelnay jug xoog leh oo dhacday, dhowr askari ayaa xiligaa goobta ku sugnaa" ayay tiri Maryan Cumar oo ka mid ahayd haweenkii uu dhaawacu soo gaaray.
Haweenka dhaawacyadu gaareen ayaa tiradooda lagu sheegay illaa 10 iyadoo loo qaaday isbitaalada Muqdisho, mana jiraan wax ciidamo ah oo dhaawacyo ay kasoo gaareen weerarkaas.
Sarkaal u hadlay DF ayaa weerarka ku eedeeyay Al-shabaab, isagoo sheegay inay socdaan baaritaan lagu hayo dhowr qof oo ay falka u qabteen, wuxuuna sheegay in xaaladu ay caadi tahay, dhaawacyadiina la qaaday.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca qaraxyo iyo duqeymo ay khasaare kasoo gaarto dadka shacabka ah, iyadoo weerarka maanta uu imaanayo xili ay DF isku dayayso inay adkeyso Amaanka Caasimada.